Sida loogu diyaariyo qaabka mugdiga ah MIUI 11 iyo MIUI 12 | Androidsis
Mid ka mid ah howlaha sababay dareenka weyn ee taleefannada gacanta ayaa ah habka mugdiga ah, oo hadda laga heli karo adeegyo badan oo dalab ah oo shirkadaha kala duwan ah. Soo saare kastaa wuxuu u sameeyaa qaab kaleIyada oo ay taasi jirto, waa isla shaqadii lagu beddeli lahaa muuqaalka muuqaalka isla markaana u oggolaan lahaa in la badbaadiyo boqolkiiba wanaagsan ee batteriga.
Qalabka Xiaomi, Redmi iyo Pocophone wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku dhaqaajiso lakabka caadada MIUI, noocyadiisii ​​ugu dambeeyay xitaa waxaad fursad u leedahay inaad barnaamij ka samayso. Barnaamijku si otomaatig ah ayaa loo samayn karaa, kaliya dooro wakhti oo dhaqaaji ikhtiyaarka halbeegga.
Labadaba MIUI 11 iyo MIUI 12 labadaba waxaan kuqori karnaa qaabka mugdiga ah, waa sax isla meesha, markaa way shaqeyn doontaa haddii aad wadada ku dhacdo. Waxa ugu horeeya waa in la kiciyo Mowjadda Madoow ee taleefankeena, ka dib waa inaan raacnaa tillaabooyin yar oo aan ku dhaqaajineyno xilliyada ay indhaheennu dhibaatada ugu badan qabaan, tusaale ahaan laga bilaabo 18:00 pm ilaa 9:00 am.
Qaabka mugdiga ah ee MIUI 11 iyo MIUI 12 wuxuu kaloo keydin doonaa batteriga aragga oo aad u xanuunsanaya mooyee, waxaa lagugula talinayaa inaad sidaas sameyso haddii aad u isticmaasho saacadaha iftiinka yar. Si aad u barnaamij u sameyso waa inaad ku dhaqaaqdaa talaabooyinka soo socda:
Waxa ugu horeeya ee lagama maarmaanka u ah waa in la kiciyo habka mugdiga ah ee taleefankaaga Xiaomi, Redmi ama Pocophone, si aad u sameyso u tag Settings> Display> mode Dark> waana inaad ku dhejisaa
Marka aan ku dhex jirno Moodhiga Mugdiga ah, waxaan ku habeyn karnaa dhowr faahfaahin, oo ay ku jiraan barnaamijka waqtiga ay habboon tahay in Muuqaalka Madaw la hawlgeliyo.
Gudaha Mugdiga Hoos u dhaadhaco oo xagga hoose waxay ku tusi doontaa ikhtiyaarka barnaamijka waqti go’an, in la dhigo 18:00 pm haddii ay tahay 13:00 pm waa la daminayaa, laakiin ha ka welwelin
Hadda wax yar ka hooseeya barnaamijka waqtiga la daarayo Xaaladda Madaw iyo waqtiga la daminayo, marka loo eego waxaa la hawlgeliyaa 19:00 fiidnimo oo la xidhaa 7:00 subaxnimo, waxa ugu haboon ayaa ah in la kiciyo 18:00 pm ilaa 18:30 pm iyo in uu si otomaatig ah u xidho 8:00 a.m.
Habka mugdiga ah ee aaladaha kale waxaa badanaa lagu hawlgeliyaa gacanta, inkasta oo ay jiraan xulashooyin ku dhex jira shaqadan, iyo sidoo kale codsiyo dibadeed oo leh qaab mugdi ah oo u gaar ah Qalabka astaanta Aasiya oo ay ugu mahadcelinayaan MIUI 11 iyo MIUI 12 ayaa u fududeynaya dhammaan milkiilayaasha taleefannada Xiaomi, Redmi iyo Pocophone.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Sida loo diyaariyo qaab mugdi ah MIUI 11 iyo MIUI 12